वीरलाई कोभिड-१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल तोकेपछि किन भयो किचलो? :: Setopati
वीरलाई कोभिड-१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल तोकेपछि किन भयो किचलो?
हिजो (मंगलबार) देखि वीर अस्पतालकी निमित्त निर्देशक डा. शान्ता सापकोटा विदामा छिन्। सरकारले कोभिड महामारीभर कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई विदामा नबस्न निर्देशन दिएको बेला नेतृत्व तहकी डा. सापकोटा विदा लिएर घरमा बसिरहेकी छन्।
व्यक्तिगत कारण देखाइए पनि डा. सापकोटा विदामा बस्नुको कारण अर्कै छ। गत जेठ ६ गते सरकारले कोभिड-१९ सम्बन्धि अध्यादेश जारी गर्‍यो। जसमा वीर अस्पताललाई कोभिड-१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल बनाउने र त्यसको सञ्चालन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने भनियो। यसअघि वीर अस्पताल, नेशनल एकेडेमी अफ मेडिकल साइन्स 'न्याम्स' को स्वामित्वमा थियो।
अध्यादेशमार्फत वीर अस्पताललाई आफ्नो हातमा लिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जेठ १० गते मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमलाई सो अस्पतालमा प्रमुख कार्यकारी अधिकारीको जिम्मेवारीमा पठाउने निर्णय गर्‍यो।
मन्त्रालयले नयाँ जिम्मेवारी थमाइदिएपछि डा. गौतम वीर अस्पताल पुगे। पहिलो दिन उनले निर्देशक सापकोटाकै कार्यकक्षमा गएर हाजिर गरे र कोभिड उपचारका लागि सञ्चालनमा ल्याउन तरखरमा रहेको नयाँ सर्जिकल ब्लकको निरीक्षण गरे। त्यो बेला निर्देशक सापकोटाले डा. गौतमले त्यहीँ सर्जिकल ब्लकमा आफ्नो कार्यकक्ष बनाएर बस्नेछन् भन्ने लागेको थियो, तर त्यस्तो भएन।
अर्को दिन डा. गौतमले निर्देशक सापकोटाकै कार्यकक्षमा अस्पतालका पदाधिकारी र कर्मचारीको बैठक बोलाए। निर्देशक सापकोटा पनि बैठकमै थिइन्। बैठकमा डा. गौतमले ‘अब अस्पतालको सबै थोक मै हुँ’ भन्ने खालको कुरा गरेको बैठकमा सहभागी एक कर्मचारीले सेतोपाटीसँग भने।
'उहाँले निर्देशककै कार्यकक्षमा बैठक गर्नुभएको थियो। त्यसपछि भने, 'आइ एम द अल' भन्ने किसिमले कुरा गर्नुभयो,' ती कर्मचारीले भने, 'त्यसपछि निर्देशकको ढोकामा रहेको 'नेम प्लेट' नै हटाएर आफ्नो राख्न भन्नुभयो।'
उनले डा. गौतमले देखाएको शैलीलाई अशोभनीय भन्दै दादागिरीपन देखाएको जिकिर गरे। ‘यो दादागिरी शैली भयो। मेरो शक्ति छ भने मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने शैली हो यो,’ उनले भने।
यता निर्देशक सापकोटाले आफू हिजैबाट बिदामा रहेको भन्दै आइतबारबाट मात्र काममा फर्किने जानकारी दिइन्। ‘म हिजोबाट छुट्टीमा छु। मेरो खासै काम नि भएन। त्यसैले चार पाँच दिन बिदामा छु,' उनले सेतोपाटीसँग भनिन्।
आइतबारबाट काममा फर्किए पनि आफू हाजिर गरेर फर्किहाल्ने सापकोटाले बताइन्। ‘मेरो कार्यकक्ष पनि छैन। त्यसैले आउँछु अनि हाजिर गरेर जान्छु। मलाई न्याम्सले नियुक्ति दिएको हो र न्याम्सले मलाई अर्को ठाउँ पनि दिएको छैन। त्यो भएर मैले काम गर्ने वातावरण नै छैन,’ उनले भनिन्।
यता डा. जागेश्वर गौतमले आफूलाई निर्देशक सापकोटा विदामा रहेको जानकारी नभएको दाबी गरे। ‘मेरो कारणले निर्देशक सापकोटा विदामा बस्नुको कुनै कारण छैन, ‘अर्को कार्यकारी आएपछि निमित्त निर्देशक किन विदामा बस्नुभयो? त्यो मलाई थाहा भएन।'
निर्देशक सापकोटालाई आफूले कार्यकक्षबाट हटाउन कुनै हतारो नगरेको गौतमले बताए। ‘मैले दुई तीन दिनको समय दिएको थिएँ। अब छोडेर नगइ बसिराखेपछि मैले त भन्नै पर्‍यो नि,' गौतमले सेतोपाटीसँग भने।
उनले अध्यादेशले नै आफूलाई प्रमुख कार्यकारीको अधिकार दिएकाले आफूले उक्त अधिकार प्रयोग गरेको दाबी गरे। ‘अध्यादेशले नै वीर अस्पताल भनेको कोभिड-१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल हो भनेको छ। र त्यसको सञ्चालन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने भनेको छ,’ उनले भने, ‘अनि मन्त्रालयले मलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी भएर पठाएपछि म कहाँ गएर काम गर्ने? मन्त्रालयले मलाई शैक्षिक कार्यक्रमको लागि मात्र न्याम्ससँग समन्वय गर्नू र अरू अधिकार तपाईँको भनेको छ।'
न्याम्सका उपकुलपति डा. डिएन शाहले निमित्त निर्देशक डा. शान्ता सापकोटा अहिले पनि निर्देशककै भूमिकामा रहेको बताए। उनले निर्देशकको खारेजीबारे मन्त्रालय या न्याम्सबाटै लिखित निर्देशन नआएको भन्दै सापकोटा अहिले पनि निर्देशककै पदमा यथावत रहेको प्रष्ट पारे।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गौतमलाई सिइओ तोकेपछि आफूहरूले मन्त्रालयमा कुरा राखेको भन्दै डा. शाहले भने, ‘उहाँलाई सिइओ तोकिएपछि हामी गएर मन्त्रालयमा कुरा गर्‍यौं। त्यो बेला नै मैले निर्देशक पदको खारेजीको बारेमा कतैबाट कुनै लिखित निर्देशन आएको छैन भन्दै निर्देशकको स्थिति यथावत छ भनेर कुरा राखेँ।’
कार्यकक्षको विषयमा अहिले नयाँ कार्यकक्ष तयार नभएको स्थितिमा डा. गौतमले निर्देशकको सापकोटाको कार्यकक्ष प्रयोग गरेको उपकुलपति शाहले जनाए। ‘मैले डा. गौतमसँगै कुरा गरेँ। उहाँले अहिले कार्यकक्ष नभएको र छिट्टै नयाँ भवनमा कार्यकक्ष बन्ने भन्दै त्यतिञ्जेल निर्देशकको कार्यकक्ष प्रयोग गरेको भन्नुभएको छ,' उनले भने।
उपकुलपति शाहले डा. सापकोटालाई भने विभागमै रहेर नियमित काम गर्नू भनिएको बताए। ‘उहाँ विभागीय प्रमुख पनि हो। त्यसैले उहाँलाई विभागमै रहेर निर्देशकले गर्ने काम पनि गर्दै गर्नू भनेका छौं,' उनले भने।
कतिपयले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वायत्त संस्थामाथि अध्यादेशको बलमा हस्तक्षेप गरेको बताएका छन्। तर मन्त्रालयले कोभिड महामारीभर मात्र अस्पताल सञ्चालनको जिम्मा लिएको भन्दै डा. शाह भन्छन्, ‘मन्त्रालयले जबसम्म कोभिड हुन्छ, तबसम्म मात्र सञ्चालनको जिम्मा लिइने भनेर भनेको छ। त्यसपछि अस्पताल पुनः न्याम्सले नै सञ्चालन गर्छ।’
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १९, २०७८, १७:०७:००